Posted On 03-03-2018, 02:18PM
GAROOWE, Puntland- Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ayaa ka hadlay arrimaha uu dastuurku u saamaxayo xilli dowladdu ku leexisay inay mas'uul ka yihiin doorashada 2019, taasoo uu jiro walaac ay muujiyeen siyaasiyiin la baxay Puntland Focus Group.
TPEC, ayaa shirkaas oo ay kusoo bandhigayeen 5 urur oo is-diiwaangaliyay, waxay ku sheegeen in Dastuurka Puntland uu cadaynayo shaqada loo igmaday, taasoo ah inay sameeyay doorashooyinka golayaasha deegaanka islamarkaana soo saaraan saddex Xisbi Qaran ee ka qayb qaadanaya doorashada guud ee maamulka Puntland.
Guddoomiyaha Guddigan KMG ah ee TPEC, Cabdiraxmaan Diiriye Samatar, oo khudbad ka jeediyay kulankaas ayaa xusay in u jeedka shirkoodu ku qotomo inay soo bandhigaan waxqabadkooda iyo waxa loo igmaday.
"Anagu waxaan u idmanahay marka 1aad inaanu diiwaangalino ururrada siyaasadda, inaanu wacyigalin samayno sababtoo ah dadkaan waxay u baahanyihiin inay fahmaan howshan, waxaa dhacda in dadku na weydiiyaan waqtiga aan u furayno xisbiyo, bahashu halkaas ayay maraysaa," ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland.
Guddoomiyaha TPEC, isagoo sii hadlaya wuxuu intaas ku daray in mudada jiritaankeedu ku egyahay waqtiga ay soo saaraan saddex Xisbi siyaasadeed.
"Anagu waqtigayagu wuxuu ku egyahay marka aan soo saarno saddex Xisbi siyaasadeed oo heer qaran ah oo ku soo baxaya doorashooyinka dowladaha hoose islamarkaana diyaar u noqda inay u tartamaan doorashada guud ee Puntland, halkaas ayuu teeramkayagu joogaa, waxaana cadaynaya xeerka Guddiga Doorashooyinka iyo Dastuurka Puntland." sidaas waxaa khudbadiisa ku daray Guddoomiye Cabdiraxmaan.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay waxqabadka ay sameeyeen mudadii ay xafiiska joogeen isagoo sheegay inay diiwaangaliyeen Shan urur oo kala ah; Umadda, Garsoor, Aaran, Ubax iyo Himilo, kuwaasoo ay guddoonsiiyeen shahaadooyin KMG ah oo u saamaxaysa inay xafiisyo ka furtaan gobollada Puntland.
Ururadan ayaa wali buuxin shuruudihii rasmiga ahaa ee looga baahnaa iyadoo halkaas ka maqan yihiin dhamaan qodobadii saamixi lahaa in Puntland ka dhacdo doorasho Hal qof Hal cod ah sanadkaan ka dhiman Madaxweyne Gaas waqtigiisa taasoo ah 7 bilood marka laga reebo xiliga la gudagalayo xulshada Barlamanka iyo fadhiyada ay yeelan doonaan Xildhibanada cusub.
Madaxweyne Gaas oo isagu aan daacad ka aheyn in nidamakaan xorta ah uu meeshii ugu yimid ka sii wado ayaan isaga iyo siyaasiyiinta kula weheliyey Shantii sano talada Puntland waxay ka baqeen in xisbi ay leeyihiin furtaan kaasoo hadda aan kamid aheyn xisbiyada la sheegey in ay is-diwaan galiyeen.
Dowladii Madaxweyne Farole oo nidamakaan meel fiican gaarsiisey aya ururadii siyaasada ee ku guuleystey iney is-diwaan galiyaan ayaa waxaysan ka muuqan Liiskaan cusub ee la soo gudbiyey maanta.
Dhinaca kale goobta arrintan guddigu KMG ee doorashada kaa shaacinayay mowqifkiisa iyo shaqadiisa waxaa joogay, wasiiro kamid ah xukuumadda Puntland oo ay kamid yihiin; Wasiirrada Arrimaha Gudaha, Warfaafinta, Dastuurka, Guddoomiyaasha gobollada, xubno kasocday ururrada is-diiwaangaliyay, dhalinyarada iyo bulshada rayidka ah.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo dowladaha hoose, Cabdullaahi Cali Xirsi Timacadde, ayaa hadalkooban ka jeediyay goobta ayaa sheegay inuu shirka bogaadinayo islamarkaana amrayaan in gobollada Puntland laga furto xafiisyada ururrada Puntland, isagoo tilmaamay inay la shaqayn doonaan.
Hadalkaas kadib wasiirrada ayaa goobta ka baxay iyadoo aan la ogayn sababta inay la xariirto mowqifka uu guddigu cadeeyay iyo in kale.
Xukuumadda Gaas uu hogaaminayo ayaa lagu eedaynayaa inay doonayso muddo kororsi sharci darro ah, waloow Afhayeenka xukuumadda oo goor sii horeysay la hadlay BBC-da uu ka gaabsaday in si cad uga hadlo tuhunkaas, balse ku riixay TPEC inay wakiil uga tahay doorashada.